New Seven Knights 2 Inotangisa Munyika Yese neMahara-ku-Kutamba Game
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Seven Knights 2 Inotangisa Munyika Yese neMahara-ku-Kutamba Game
Mafans eNetmarble yepakutanga uye yakareba-inomhanya nhare yekutamba mutambo weSeven Knights ikozvino inogona kutanga itsva, yakadzika, uye inonyudza cinematic chitsauko chefranchise seSeven Knights 2 ichiita zviri pamutemo kutanga kwayo pasi rese. Mutambo uyu wave kuwanikwa sekudhawunirodha mahara paApp Store neGoogle Play. Vashandisi vanogona kuona vhidhiyo nyowani-nyowani yekutangwa paOfficial Seven Knights 2 YouTube Channel.
Seven Knights 2 inoitika makore makumi maviri mushure mekutanga Seven Knights mutambo. Iyi nyaya nyowani inomira paDaybreak Mercenaries inotungamirwa naLene, mwanasikana waEileene, ari nhengo yeManomwe Knights mumutambo wekutanga. The Daybreak Mercenaries vanotanga rwendo rwekutsvaga Rudy, nhengo yekupedzisira yeManomwe Knights, mushure mekutevedzana kwezviitiko zvinosanganisira musikana asinganzwisisike anonzi Phiné. Mafeni pasi rese anogona zvino kutanga kuunganidza nekugadzira magamba ane hunyanzvi pavanenge vachiita nyaya yakadzika uye inonyudza yemubhaisikopo.
Kupemberera kutangwa kwemutambo, Netmarble iri kuronga chiitiko che "New Mercenary Commander Special Daily Login", ichibvumira vashandisi kuvhura mibairo yakasiyana-siyana, kusanganisira Yenhoroondo Giredhi 'Saint of Light Karin' pamusi wechinomwe wekupinda-mukati kumutambo.
Akakosha maficha vatambi anogona kutarisira pakuvhurwa anosanganisira:
• Collectible Charismatic Heroes: Kune huwandu hwemavara makumi mana nematanhatu aripo kuti auunganidze pakuvhurwa, kusanganisira mavara akajairika kubva kuManomwe Knights ekutanga anobatanidzwa nevatsva Mavara manomwe mavara.
• Challenging Boss Fights:
o Vatambi vanogona kutarisira kuronga nemadhiketi akasiyana vachishandisa akasiyana magamba enziyo, maumbirwo uye mhuka dzinovaraidza.
o Pamusoro pezvo, vatambi vachapinda muhondo vachishandisa hunyanzvi nezviratidzo zvinoshamisa, vachitora muhondo dzeboka chaidzo vachidzora magamba mana kamwechete.
• Yakadzama, Inonyudza Cinematic Nyaya: Seven Knights 2 ine nyaya yakadzama uye inonyudza ine maawa maviri emhando yepamusoro-yemhando yepamusoro bhaisikopo cutscenes kuti mafani ekutamba anakirwe.
Seven Knights 2 icinematic mobile RPG iyo inobvumira vatambi kuunganidza uye kugadzira magamba anoshamisa eese maumbirwo uye saizi pavanenge vachiita nyaya yakadzika uye inonyudza yemubhaisikopo nekuda kwekutonga-chaiyo-nguva uye mu-mutambo kurodha ane heroic stat musanganiswa, maumbirwo, uye. mhuka dzinovaraidza. Iine nyeredzi ruzhinji rwemavara anoratidzwa neakanakisa emhando yepamusoro magiraidhi anofambiswa neUnreal Injini 4, Manomwe Knights 2 achanyudza vatambi mune yechokwadi sequel ine inonakidza uye inoyevedza gameplay yeManomwe Knights anonakidzwa nevatambi pasi rese.
Parizvino, Seven Knights yaona mamirioni makumi matanhatu ekurodha pasi rese. Manomwe Knights 60 akabudirirawo muKorea, aita chinzvimbo # 2 muApp Store uye #1 paGoogle Play maererano nemari yakawanikwa zvichitevera kutangwa kwayo muna Mbudzi 2. Zvichitevera kutangwa kwepasi rose, Makiri Manomwe 2020 achavepo kuti atambe mumitauro gumi nembiri, kusanganisira Chirungu, Japanese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Thai, Portuguese, Spanish, German, Italian, French, Russian, and Indonesian.